News Collection: कसरी युवतीलाई फकाउने ?
कसरी युवतीलाई फकाउने ?
म २० वषर्ीय विद्यार्थी हुँ। म अहिले बीएड दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छु। प्रेम गर्ने अत्यन्तै रहर भए पनि अझसम्म कसैसँग पिरती बसेको छैन। मलाई युवतीहरूसँग बोल्न पनि डर लाग्छ। अरूले प्रेम गरेको देखेर डाहा पनि लाग्छ। कसरी बोल्दा युवतीहरू नजिक आउँछन् ? कसरी युवतीलाई फकाउने ? युवतीको नजरमा राम्रो देखिन के गर्ने ?
२० वर्षको उमेरसम्म पनि तपाईं यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भने तपाईं साह्रै लजालु प्रवृत्तिको युवक हुनुहुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। सर्वप्रथम त तपाईंले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रेम गरेर हुने होइन, आफैं हुने कुरा हो। प्रेम आफंै हुन्छ भन्दैमा चुप लागेर बस्दैमा प्रेम हुँदैन। प्रेम हुनका लागि सर्वप्रथम युवा-युवतीबीच परिचय हुनुपर्छ। त्यसपछि उनीहरूबीच एक-अर्काप्रति आकर्षण हुनुपर्छ। एक-अर्काप्रतिको आकर्षणले युवा-युवतीलाई एक-अर्काको आवश्यकताको तहमा लान सघाउँछ। आवश्यकताको तहमा पुगिसकेपछि एक-अर्काको हाउभाउ एवं शरीरको भाषाले युवा-युवतीबीच प्रेम छ कि छैन ? भन्ने कुरा बताइरहनुपर्दैन। कतिपय अवस्थामा युवा-युवतीहरू आफ्नो मित्रता र प्रेमलाई फरक परिभाषा दिएर बसेका हुन्छन्। तपाईंको हकमा सबैभन्दा पहिले आफ्नो मनबाट डर निकाल्नुहोस्, त्यसपछि आफूलाई मन परेकी युवतीसँग कुनै -आफ्नो साथी वा युवतीको साथी) माध्यमबाट मित्रता गाँस्नुहोस्। मित्रताका क्रममा ती युवतीले तपाईंका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न थालिन्, तपाईंसँग बढीभन्दा बढी समय बिताउने चाहना गर्न थालिन् भने सम्झनुहोस् ती युवती तपाईंप्रति आकषिर्त छिन्। त्यस्तो आकर्षणका बेला आफ्ना मनको कुरा व्यक्त गर्नुहोस्। तपाईंको समस्या समाधान हुनसक्छ।